September 2007 ~ မာန်လှိုင်းငယ်
3:41 PM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
3:13 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
လေးစားအပ်ပါသော နိုင်ငံတကာရောက် ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသားပြည်သူ၊ အမိအဖ၊ တိုင်းရင်းသား ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံး။
သံဃာတော်များဦးဆောင်မှုနှင့်အတူ ပြည်သူများ ကိုင်စွဲချီတက်ခဲ့သော ကြွေးကြော်သံများဖြစ် သည့်
(က) စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရေး၊
(ဂ) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ပေးရေး ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်သံဃာတော်များ၏ မေတ္တာပို့တောင်းဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေမှုတွင် ပါဝင်နေသော ဆရာတော်သံဃာတော်၊ ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသားပြည်သူ၊ အမိအဖအပေါင်းတို့အား (နအဖ)စစ်အုပ်စုတို့က မိုက်ရိုင်းစွာ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ ဒိုင်းများကိုကာပြီး နံပါတ်တုတ်များ၊ ၀ါရင်းတုတ်များ၊ စက်သေနက်များနှင့် ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်၊ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းနေမှုကို ရပ်တန်းက ရပ်နိုင်အောင် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီကြပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ နအဖစစ်အုပ်စုသည် မနေ့ကထက် ယနေ့တွင် ပိုမိုအကြမ်းဖက်မှုများ လုပ်နေပါသည်။
နိုင်ငံတကာရောက် ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသားပြည်သူ၊ အမိအဖ၊ တိုင်းရင်းသား ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံး ပြည်တွင်းက ဆန္ဒပြသူ သံဃာတော်ဆရာတော်များနှင့် ပြည်သူအပေါင်းတို့နှင့် ပျံလွန်တော်မှုသွားသည့် ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ ကျဆုံးသွားသည့် ပြည်သူတို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ နေအိမ်၊ ကျောင်း၊ ရုံးများတွင် ဖယောင်းတိုင်များ ထွန်းညှိပြီး မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းမှုများ လုပ်ပေးကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
2:57 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
2:54 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ အခြေအနေ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ ရင်သွေး ---
ပြည်သူ့အတွက် အသက်ကို စတေးခံကြတော့။
ပြည်သူ့အတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ရှေ့မျက်နှာထွက်ပြီး
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇)ရက်။
10:51 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ အရာခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ။
10:39 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
သံဃာများရဲ့ သစ္စာအဓိဌာန်ကို တင်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာတပ်ပေါင်းစုကြီးနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ပူးတွဲကြေညာချက်
10:07 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာတပ်ပေါင်းစုကြီးနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ပူးတွဲကြေညာချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကြေညာချက်
10:03 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ပြည်သူ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကြေညာချက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဖတ်ပြီးတော့လဲ ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
4:25 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြပွဲရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တင်ထားတာပါ။
3:24 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
CRPP အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ရဲ့ ပြည်သူတို့ ပန်ကြားလွှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၄၊ ၉၊ ၂၀၀၇ နေ့က သံသာတော်များနှင့်အတူတကွ ပြည်သူများ ဆန‘အမှန်ကို ပြကြခြင်း
3:09 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
သံဃာတော် ဆရာတော်များနှင့်အတူတကွ ပြည်သူများ ဆန္ဒမြှန် ဖော်ထုတ်ကြခြင်းဖြ်းပါတယ်။
2:59 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မြန်နမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အထူးပန်ကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းလူထုလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု၏ တိုက်တွန်းပန် ကြားချက်
4:19 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကံဆောင်သံဃာတော်များ ဆွမ်းကွမ်း ထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ (ရန်ကုန်) ဖွဲ့စည်းခြင်း
4:09 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကံဆောင်သံဃာတော်များ ဆွမ်းကွမ်းထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ (ရန်ကုန်) ဖွဲစည်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
4:03 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
သုတေသနနှင့် လေ့လာရေးဌာနမှ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် (အမှတ်စဉ် ၂/၂၀၀၇)ဖြစ်ပါတယ်။
3:44 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဒီဆောင်းပါးကို နှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကြိုက်လို့ ဒီမျာ တင်ထားလိုက်ပါပြီး။
ဒီပုံလေးဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗမာပြည်ကောင်းပွိုင်ပါပဲဗျာ။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ။ ကြည့်ကြပါဗျို့။ ဘယ်လောက်ကြည့်ကောင်းလိုက်မလဲနော်။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ။
2:31 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စည်းကမ်းရှိစွာ
စနစ်တကျ အကြမ်းမဖက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် တောင်းဆိုကြပါရန်
ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူ တပ်မတော်သားအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုမှ လူထုတပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းမည့် (၂၃)ရက်မှ (၂၅)ရက်နေ့အတွင်း အိမ်တိုင်း ကျောင်းတိုင်း ရုံးတိုင်းမှ အောက်ပါမေတ္တာပို့ကို ရွက်ဆိုရန် နှိုးဆော်ထားပါသည်။
မေတ္တာဓါတ်နည်းပါးနေသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့တိုင်း ရွာတိုင်း အိမ်များ၊ ကျောင်းများ၊ ရုံးများ၏ ၀င်ပေါက်များတွင် ည (၈)နာရီမှ စတင်၍ (၁၅)မိနစ်ကြာ ရွက်ဆိုကြရန် ဖြစ်ပါသည်။
3:43 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
နျူကလီးယား အိပ်မက်တွေကို အဆုံးသတ်
အတုအယောင်လမ်းပြမြေပုံ (၇)ချက်ကို ဆိုင်းငံ့ပြီး
သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို လုပ်လိုက်ပါ။
လူမျိုးတုံး၊ ဖြုတ်ရေးဝါဒီ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ
ရက်စက်မှုသရဖူကို ထပ်ပြီး ဆောင်းမနေပါနဲ့တော့
စစ် နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ
ငြိမ်းချမ်းရေးဆီ လှမ်းသွားလိုက်ပါ။ ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်။
မှတ်ချက်။ ။ ရဟန်းသံဃာတော်များ သပိတ်မှောက်ကံဆောင် ချီတက်ဆန္ဒပြခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီကဗျာနဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါကြောင်း။
ရဟန်းသံဃာများရဲ့ သုံးရက်မြောက် ဆန္ဒပြပွဲ ကျောင်းသားလူငယ်နဲ့ ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်
3:36 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကောင်းကင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ . . . သူ
အကြွေးကျန်ခဲ့သလိုလိုပဲလေ ။ ။
<> တွင်ကွယ်လွန်သွားသော ဖခင်ကဗျာဆရာဦးကြည်တင်ဦး အတွက်အမှတ်တရ ….
3:17 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
တယောက်တော့ ငရဲပြည်သွားပါပြီး။ ကျန်နေသူများ အသက်ကို များများလုထားကြပါတော့။ တင်ထွန်းဆိုတဲ့ လူက အစ်ကိုအတွက် သူရဲကောင်းလုပ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သေနေ့စေ့မယ့် လူကတော့ သေမှာပဲ။ တခုတော့ရှိတာပေါ့။ အဲဒါကတော့ အာဏာရူးစစ် ဘီလူးတွေအတွက်တော့ သတိထားစရာလေးပါပဲ။
12:54 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
သံဃာဘုန်းတော်ကြီးများ သပိတ်မှောက်ကံဆောင် ခှိတက်ပွဲ ဗွီဒီယို စြဖ်ပါတယ်။
ရောင်နီဦးကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲ ဓါတ်ပုံ
2:28 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကျန်ရှိနေသေးတော ပုံများကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
2:18 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် ရောင်နီဦးကျောင်းသားကျောင်းသားများ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား ဓါတ်ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်။
1:14 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
The 88 Generation Students.
သံဃာတော်များ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ချီတက်ပွဲ ဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။
11:56 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
တပ်မတော်သားသို့ တမ်းချင်း သီချင်းကို ကျနော် တင်ထားပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ အမိမြန်မာနှိုင်ငံက ပြည်သူပြည်သား တွေ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဘ၀ကို တပ်မတော်သားတွေကို ပြောပြနေတာပါ။
1:57 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
2:23 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကျနော် ဆရာတင့်ခိုင်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ထုဆစ်ပေးမည့် အိမ်ကလေး တစ်အိမ်စာအုပ်ထဲမှ ဒီဝတ္ထုကို ကြိုက်သောကြောင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ပြန်ပြီး ဝေငှပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒိဝတ္ထုတိုကို ဖတ်ပြီးတော့ မိမိတို့ရဲ့ အနာဂတ်မှာ လှပလာမယ့် အိမ်ကလေး တစ်အိမ်လောက် တည်ဆောက်ထုဆစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယူဆမိပါသည်။ ဆရာတင့်ခိုင်ရဲ့ ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ပဲ ဖစ်ြပါတယ်။ ထုတ်ဝေတဲ့ နှစ်က နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ပါ။ နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါသည်။
“အနာဂတ်ကို ထုဆစ်ပေးမည့် အိမ်ကလေးတစ်အိမ်”
ကျနော်ရေးသားသော “အိမ်”သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအရ House ဟု ရေးသားရသော “အိမ်”ဟု ရေးသားရသော အိမ်မဟုတ်ပါ။ “Home” ဟု ရေးသားရသော စကားကိုသာ “အိမ်”ဟု ပြော လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်မှု မှားယွင်းကောင်း မှားယွင်းနေမည်ဟု ပြော၍ရနိုင်သော်လည်း မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နှုတ်ကျိုးနေပြီဖြစ်သော “အိမ်” ဟူသော ဝေါဟာရကို ခံတွင်းတွေ့၍ သုံးစွဲ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်သည် စိတ်ပညာသမားတစ်ဦးဖြစ်၏။ အင်ဂျင်နီယာ မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ အဆောက်အ အုံဖြစ်နေသော “အိမ်”ကို ကျနော် စိတ်မ၀င်စားပါ။ မိသားစုများ အတူတကွ ပူးပေါင်းနေထိုင်ကြပြီး လူ့ဘ၀ကို တည်ဆောက်နေကြသော အဆိုပါ မိသားစုများနေထိုင်ရာ နေအိမ်ကလေး၏ မိသားစုဘ၀ ကိုသာ ကျနော်က “အိမ်” ဟု တင်စားဖွဲ့ဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မင်းတို့မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာမှ ရှိသေးရဲ့လား၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေကို ဘယ်လောက် အားနာ စရာကောင်းသလဲ၊ မအေကိုယ်တိုင် ရှိနေပါလျက်နဲ့ မအေက တစ်ခွန်းမတားဘူး၊ လွတ်လပ်မှုတော့ ဟုတ်တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ လွတ်လပ်မှုက တခြားလူတွေကို ထိခိုက်တဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ ပရမ်းပတာ လွတ်လပ်မှု၊ ထွီ ---”
ကျော်ထွေးသည်း အတော်ကလေးဒေါသထွက်နေဟန် ရှိသည်။ စက်ကို ချက်ချင်းပိတ်ပစ်လိုက် သည်။
ခင်ထွေးညိုက ဒရင်းဘက်တ်မှ ထလာကာ ဒေါသတကြီးနှင့် ပြောသည်။
“ပိတ်ပစ်တာ၊ ဂီတဟာ ဆူညံသံမဟုတ်ဘူးကွ၊ မင်းနားလည်လား”
“ရှင့်လို တောသား အရိုင်းအစိုင်းအနေနဲ့တော့ ဘယ် နားခံလို့ရမလဲ၊ ဒါက ခေတ်ရှင့် ခေတ်”
အဖေနှင့် အမေ အချေအတင်ပြောဆို ရန်ဖြစ်နေသည်ကို သားသမီးများအနေဖြင့် ငြိမ်သက်စွာ နားထောင်နေမည်လားဟု ကျနော်ထင်ခဲ့မိသည်။
သားနှင့် သမီးက တစ်စင်ထထောင်သည်။
“ကျုပ်တို့ဖာသာ ကျုပ်တို့ကတာ ခင်ဗျားကြီးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားကြီး နားမထောင်နိုင်ရင် အပြင်ထွက်သွား”
ကျော်ထွေးကို ဖခင်ဟု ဆယ်ကျော်သက် သားနှင့် သမီးတို့က မမြင်။ ရန်သူဟု ထင်နေပုံပေါ် သည်။
ကျော်ထွေး၌ ဖခင်တစ်ယောက်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ပျောက်ဆုံးနေလေပြီ။
ကျနော် မ၀င်၍ မရတော့ဟု ထင်သည်။
“ကျော်ထွေး၊ မင်းစိတ်ကို မင်းငြိမ်အောင်ထိန်းထားကွာ၊ ဒီပြဿနာကို ခုချက်ချင်း မင်းဖြေရှင်း လို့ မရနိုင်ဘူး၊ အမြစ်တွယ်နေပြီလေ သူငယ်ချင်း၊ ဒီတော့ မင်းစိတ်ကို မင်းလျှော့လိုက်တော့”
ကျော်ထွေးက ကျနော့်အား စူးစိုက်စွာ ပြန်ကြည့်သည်။ ကျနော်က သူအား မျက်ဝန်းမှတဆင့် အသံတိတ်စကားတွေ အများကြီး ပြောပြလိုက်သည်။
ကျနော်တို့ “အိမ်”ထဲမှ ချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် “အိမ်”၏ အပြင် သို့ ခြေလှမ်းစချလိုက်သည်နှင့် သီချင်းသံက ပို၍ပင် ကျယ်လောင်လာတော့သည်။
ထူးဆန်းသည်မှာ “အိမ်”၏ အရိမ်မှ လွတ်မြောက်သွားသည်နှင့် ကျော်ထွေးသည် ပကတိ လန်းဆန်းရွှင်ပျနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကားပေါ်တက်ကြ၏။ စက်နှိုးပြီး ကားစထွက်ရန် နံပတ်တစ်ဂီယာအား ထိုးလိုက်စဉ် ကျော်ထွေး ၏ သားငယ် ရောက်ရှိလာသည်။
လူကြမ်းက မင်းသားထံမှ အပိုင်အနိုင် သေနတ်တောင်းနေသော ဟန်မျိုးနှင့်ဖြစ်သည်။
ကျနော့်ရင်သည် တဒိုင်းဒိုင်းခုန်သွား၏။ သည်မြင်းမျိုး ကျနော်မမြင်ဖူးဘူး။ သည်မျှ မိုက်ရိုင်း သော ကလေးများကိုလည်း ကျနော် မတွေ့ဘူးသည်မှာ အမှန်။
ကျော်ထွေးသည် စက်ကိုရပ်လိုက်၏။ ကားပေါ်မှ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆင်းလိုက်သည်။
“ရော့၊ မင်းလိုချင်တဲ့ ကားသော့”
ဘယ်ညာ လက်သီးအစုံသည် သားငယ်ပေါ်သို့ ပုံကျသွား၏။ သားငယ်သည် အိမ်ပေါက်ဝ လမ်းမပေါ်တွင် ပစ်လဲသွား၏။
ခင်ထွေးညိုနှင့် သူမ၏ သမီးငယ်သည် ဘယ်တုန်းက ရောက်ရှိနေသည်မသိ။ သားငယ်အား ပွေ့ချီကာ ကက်ကက်လန် ရန်တွေ့ပါလေတော့သတည်း။
စာရှုသူ ---- ။
သင့်အား ကျနော်သည် “အိမ်” လေးတစ်အိမ်ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြီ။
သင်သည် သည်အိမ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ခံစားရပါသနည်း။
သင့် ခံစားချက်ကို သင့်ဖာသာ သင်မှတ်သားထားပါလေ။
ခုတစ်ဖန်၊ နောက် “အိမ်” လေးတစ်အိမ်ထဲသို့ ကျနော်နှင့်အတူ သွားရောက်လည်ပတ်ခံစား ကြည့်ရအောင်။
အောင်သူ့အိမ်သို့ ကျနော် မရောက်ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီ။ ကျနော့်စိတ်ထင် နှစ်ပတ်ခန့်ပင် ရှိနေလောက်ပြီ။ ထို့ကြောင့်လည်း တမင်တကာ သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သူတို့နေရာ ပုလဲလမ်းထိပ်သို့ ကျနော် ရောက်သောအခါ လပြည့်ကျော်တစ်ရက် လမင်းကြီး သည် လှိုင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှီ တောအုပ်ညို့ညို့ထဲသို့ပင် ခုန်ချရန်အား မယူနိုင်သေး။ အရုဏ်ဦး အလင်းသစ်သည် ပျို့အန်ထွက်ကျစ ပြုနေလေပြီ၊ ဆောင်း၏ နံနက်ခင်းကို နှင်းပ၀ါခပ်ပါးပါးလေး လွှမ်း ခြုံထား၏။
ကျနော်သည် ဤကဲ့သို့ခရီးမျိုးကို တကူးတက သွားတတ်ပါ၏။ လေကောင်းလေသန့်ရသော မြို့ပြင်ဖြစ်သော၊ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ လမ်းလျှောက်နိုင်သော၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများ ရှိနေသော နေရာများသို့ လမ်းလျှောက်သွားလေ့ ရှိပါသည်။
လတ်ဆတ်သော လေနုအေးလေးများ မျက်နှာပေါ်သို့ ဖြတ်သန်းနှုတ်ဆက်သွားသည်ကို ကျနော် ကြိုက်သည်။ အဆိုပါ အရသာကို တရှိုက်မက်မက် ခံစားနေရလျှင် ကျနော့်စိတ်သည် ပျော်ရွှင် နေတတ်သည်။
ကျနော့်စိတ်ထင် အောင်သူတို့အိမ်သားများ မနိုးကြသေးဟု ထင်ထားသည်။ သို့ရာတွင် တစ်အိမ်လုံး နိုးနေကြလေပြီး။
သည်အိမ်သည် ကျနော့်အဖို့ တံခါးမရှိ၊ ထားမရှိ ၀င်ထွက်သွားလာ၍ရသော အိမ်မို့ ကျနော် အပေါ်ထပ်သို့ တက်သွားခဲ့သည်။
အောင်သူနှင့် သူ့သားသမီးများ ဘုရားရှိခိုးနေကြသည်။
ကျနော်သည် ကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ်တွင် ၀င်ထိုင်လိုက်၏။ ပြီးမှ စားပွဲပေါ်တွင် ရှိနေသော စာအုပ်စာတမ်းများကို ဆွဲယူကြည့်မိသည်။
မြန်မာစာအဖွဲ့မှ စံပြုဖွယ်ပုံဝတ္ထုများကို ဇာတ်နိပါတ်၊ ရာဇ၀င်၊ စာပေကျမ်းဂန်များထဲမှ ထုတ် နုတ်ပြုစုထားသော ကလေးများအတွက် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်သည်။
နောက်စာအုပ်များကို ဆွဲယူကြည့်မိပြန်သည်။ ရင်နှစ်သည်းချာ နိုင်ငံရတနာဆုံးမစာများ၊ တေဇပေါင်းချုပ်၊ ရှေးဦးသင် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များကို တွေ့လိုက်ရပြန်သည်။
အောင်သူသည် သူ့ကလေးများ၏ အနာဂတ်ကို တော်တော်လေး အလေးအနက်ထားပုံရသည်။
သည်စာအုပ်များသည် ကလေးသူငယ်များအား အနာဂတ်တွင် လူချွန်လူကောင်း ဖြစ်လာစေ ရန် အထောက်အကူပြုနေသော စာအုပ်စာတမ်းများ ဖြစ်သည်။
ခုမှ ကျနော်သတိတရပြန် ဖြစ်လာသည်။ ကျနော်သည် အိမ်သို့ရောက်ရှိတိုင်း အောင်သူ၊ ဒါမှမဟုတ် နှင်းနု၊ တစ်ယောက်ယောက်သည် ကလေးများအား ပုံဝတ္ထုဖတ်ပြနေသည်ကို တွေ့နေရ သည်။
“ကဲ --- သူငယ်ချင်း၊ ကော်ဖီသွားသောက်ကြရအောင်”
ကျနော်တို့အားလုံး အောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာခဲ့ကြသည်။
မီးဖိုချောင်စားပွဲတွင် လူစုံတက်စုံ တွေ့နေရ၏။
“နှစ်ပတ်တစ်ခါ အခုလို တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်မှာ အဖေတို့ ဘာလုပ်ကြသလဲ”
“ကဲ --- ဒီတော့ ဒီနေ့လဲ ထုံးစံမပျက် အိမ်တွင်းအိမ်ပြင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြရမယ်။ အိမ်အပြင် သန့်ရှင်းရေးကို အဖေနဲ့ သားကြီးက တာဝန်ယူလုပ်မယ်၊ အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးကို သမီးကြီးနဲ့ သမီး ငယ်က လုပ်ရမယ်၊ အဖေတို့ မိသားစုအားလုံး စားသောက်ဖို့အတွက် ချက်ပြုတ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတော့ မေမေက လုပ်မယ်၊ သားငယ်ကကော ဘာလုပ်မှာလဲ”
သုံးနှစ်ဝန်းကျင် အငယ်ဆုံး သားလေး၏ အဖြေကြောင့် အားလုံးပွဲကျသွားကြသည်။
ကျနော်က မသိ၍ မေးသည်။
“ဒီအိမ်မှာ ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ရှိနေတာ မင်းမမြင်ဘူးလား”
အောင်သူက ပြုံးစိစိနှင့် ကျနော့်အား လှမ်းပြောသည်။
ကျနော်နားမလည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ရိုးရိုးသားသားပင် ပြန်ဖြေလိုက်၏။
ကျနော့် စကားကြောင့် အောင်သူ၊ နှင်းနုနှင့် အကြီးကလေးတွေအားလုံး တခွိခွိရယ်လိုက်ကြ သည်။
“ငါ့ကို ဆင်လုပ်ပြီး စီးမှာကို ပြောနေတာကွ ငါ့ကောင်ရ”
သည်တော့မှ ကျနော် တဟားဟား ရယ်လိုက်သည်။
မိဘတစ်ဦးဦးက သားသမီးများအား ပုံဝတ္ထုပြောပြနေသည်များ၊ ပုံဝတ္ထု ဖတ်ပြနေသည်များ၊ မိသားစု ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သီချင်းဆိုပြီး လက်ခုပ်တီး ကနေကြသည်များ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြသည်များ၊ ကစားနေကြသည်များကို သာတွေ့ရ၏။
“အပျော်ဟူသည် တစ်ပါးသူအား ကူးစက်ပျံ့နှံ့စေပါ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်မည်။”
“ခုလောလောဆယ်ဆယ် အဖေက ပန်းပင်တွေ ရေလောင်းရဦးမယ်၊ ခြံထဲမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရဦးမယ်။ ဒီတော့ ဆင်ကြီးကအားမှ မအားသေးတာ အားတဲ့အခါမှ သားလေးစီးပေါ့”
“ဒါဖြင့် သားလဲ အဖေနဲ့အတူ ပန်းပင်ရေလောင်းမယ်”
ကလေးက အားကျမခံ ပြောသည်။
“ကဲ --- ဟုတ်ပြီ၊ သည်တော့ လုပ်ငန်းစကြရအောင်”
ကလေးတွေအားလုံး ထိုင်ရာမှ ထလိုက်ကြသည်။ ဖခင်တစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍသည်း ကျနော့် ခေါင်းထဲသို့ အလိုလို ရောက်ရှိလာပါတော့သည်။
သူတို့အိမ်သို့ ကျနော်ရောက်တိုင်း လင်နှင့် မယား၊ စကားများနေသည်များ၊ ကလေးနှင့် မိဘ အချေအတင် ပြောနေကြသည်များ၊ တခါမှ မတွေ့ခဲ့ရဖူးပေ။
မိဘတစ်ဦးဦးက သားသမီးများအား ပုံဝတ္ထုပြောပြနေသည်များ၊ ပုံဝတ္ထု ဖတ်ပြနေသည်များ၊ မိသားစု ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သီချင်းဆိုပြီး လက်ခုပ်တီး ကနေသြည်များ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြသည်များ၊ ကစားနေကြသည်များကိုသာ တွေ့ရ၏။
အပျော်ဟူသည် တစ်ပါးသူအား ကူးစက်ပျံ့နှံ့စေပါ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်မည်။
သူတို့မိသားစု၏ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းများသည် ကျနော့်ထံသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။
ထိုအခါ ကျနော်လည်း သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ရွှင်ပျလန်းဆန်းလာပါ၏။
စာရှုသူ --- ၊
သင့်အား ကျနော်သည် နောက်အိမ်လေးတစ်အိမ်ထဲသို့ ထပ်မံခေါ်ဆောင်ပြီးခဲ့လေပြီ။
ထိုအိမ်ထဲသို့ ရောက်ရှိသောအခ သင်မည်သို့ ခံစားရပါသနည်း။
ပထမအိမ်သည်လည်း “အိမ်” ပဲဖြစ်၏။
ဒုတိယအိမ်သည်လည်း “အိမ်” ပဲဖြစ်၏။
ထိုအိမ်နှစ်အိမ်အနက် မည်သည့်အိမ်သည် အနာဂတ်ကို လှပလာအောင် ထုဆစ်ပေးမည့် “အိမ်ကလေး တစ်အိမ်” ဖြစ်ပါသနည်း။
10:37 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကျနော် ကမ္ဘာကြီးကို ကိုင်လှုပ်နေတဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ဖတ်ရင်းနဲ့ သဘောကျသွားတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော့်ဘလော့ဂ်လေးမှာ တင်ရင်းနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်း ဖတ်စေချင်တာနဲ့ အခုလို တင်ဖြစ်သွားတာပါ။ ကျနော်သွားရောက်ဖတ်တာကလည်း ဖတ်ပါ့အွန်လိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကတဆင့် ကူးယူတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
post by phatpa
Posted September 4th, 2007 by baba in,
ယနေ့ခေတ်ကာလ ဂလိုဘယ်လုက်ဇေးရှင်းဟူသော စကားလုံးကို နိုင်ငံရေးသမားမှ အစစီးပွား ရေးသမား အထိလူတိုင်း နှုတ်ဖျားက ပြောနေကြသည်။ ၎င်းဘာသာရပ်နှင့် ပက်သက်၍ ဘီဘီစီ သတင်းဌာနက အဓိက စူးစမ်းလေ့လာမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ၏ ဆီလီကွန်တောင်ကြားဟု တင်စားနိုင်သည် ဘန်ဂလိုထက် ဂလိုဘယ် လိုက်ဇေးရှင်း အကျိုး သက်ရောက်မှု ပိုရှိသောနေရာ အနည်းငယ်သာရှိသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီးပွားရေး အလားအလာများကို ပြောင်းလဲပေးနေသော သတင်း နည်းပညာ အိုင်တီများ ဘန်ဂလိုတွင် မကြုံစဖူး ထူးထူးကဲကဲ ပွားများတိုးတက်နေသည်။ ဘန်ဂလိုမှ ခရီးသွား လမ်းညွန် ဆန်တို့ရ်ှအတွက် ဘဝမှာ အဆင်ပြေနေသည်။
အိုင်တီနည်းပညာတိုးတက်လာမှုရလဒ်က အဖြစ် ဆန်တို့ရ်ှက ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ခရီးသွား ကုမ္မဏီ getoffurass.com ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အိုင်တီအလုပ်သမားများ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးများ စီစဉ်ပေးနေသည်။
အမေရိကန် မီချီဂန်ပြည်နယ်ဖလင့်မြို့မှ မော်တော်ယာဉ် အင်ဂျင်နီယာ ဒင်းဘရိတ်အတွက် ဘဝအဆင်မပြေဟုဆိုရမည်။ သူနဲ့အခြားဘဝတူအလုပ်သမား ၂၈၀၀၀ မှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က ဂျင်နရတ် မော်တော်ကားစက်ရုံကြီးပိတ်လိုက်၍ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားကြသည်။
ထိုအချိန်ကစပြီး အလုပ်မရသေး။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေမှုကြောင့် အပြစ်တင်ကြသလို မကြုံစဖူးချမ်းသာကြွယ်ဝလာစေမှုကြောင့် ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဆိုပါက ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဆိုသည်အဘယ်နည်း မည်သည့်အင်အားစုများက ပုံဖော်ပေး နေသနည်း။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း အကောင်းလာအဆိုးလော။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း အရှိန်ကြောင့် ချမ်းသာသောနိုင်ငံများရော ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများမှ ဘဝများကိုလေးလေးနက်နက် အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသည်။ ဒက်ထရွိုက်နှင့် ဘန်ဂလိုမြို့ကြီး များကဲ့သော နယ်မြေများတွင် မျိုးဆက်တစ်ခုတွင်း၌ နေ့ချင်းညချင်း ကြီးထွားလာမှုမှသည် ရုတ်ချည်း ပြိုကွဲမှုဖြစ်သွားသလို ပြိုကွဲမှုမှသည် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထွန်းမှုတို့လည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟူသည် အောက်ပါကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင် အဓိကလမ်းကြောင်းများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် ဟုစီးပွားရေးပညာရှင်များက ယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်းလမ်းကြောင်းများ မှာ-
+ အနောက်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အလုပ်သမားများအတွက် နိမ့်ပါးသောလုပ်ခလစာများနှင့် မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းများ
+ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင် မြို့ကြီးများသို့ စုပြုံပြောင်းရွှေ့လာကြမှုများ
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပမှသည့် ယခင်ကဆင်းရဲသောနိုင်ငံများဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်၊ အိန္ဒိ စသည့်နိုင်ငံများအထိပြန့်နှံ့ နေသော ထူးထူးကဲကဲ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများတိုးပွားလာခြင်းတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေး အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်အရ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည် စီးပွားရေးပေါင်း စည်းမှုကြီးထွားလာခြင်းကို ရည်ညွန်းထားခြင်းဖြစ်ရာ ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးများသည် နိုင်ငံတကာနယ်ခြားများကို ကျော်ဖြတ်မှုများ တိုးပွား၍လာနေသည် (နိုင်ငံရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများ သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်မှုလည်း ပါလျက်ပါနိုင်သည် သို့မဟုတ်မပါတာလည်းရှိသည်။) ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေး ရှင်းသည် အသစ်အဆန်းတစ်ရပ်မဟုတ်ချေ။
စက်မှုတော်လှန်ရေး၏ အကျိုးရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ၁၉ ရာစုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အားကြီး နိုင်ငံအဖြစ် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့ရခြင်းမှာလည်း ၎င်းနှင့် ရထား လမ်းများကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့အနှံ ဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီး အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ကစ၍ ဂလိုဘယ် လိုက်ဇေးရှင်း၏ အလှမ်း နယ်ပယ်အတိုင်းအတာနှင့် ပမာဏသည် သိသာထင်ရှားစွာတိုးပွား၍လာခဲ့ သည်။
အိုင်တီသတင်းနည်းပညာလျင်မြန်စွာပြန့်ပွားလာမှုနှင့် အင်တာနက်များကလည်း ကုမ္ပဏီများ၏ ကုန်ထုန်ဖွဲ့စည်းမှုနည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲနေပြီး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်မှုလုပ်ငန်းများကို ကမ္ဘာအနှံဖြန့်ကြက်ရန် အခွင့်အပေးလျက်ရှိသည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကမောင်းနှင်နေသည်။ ၎င်းတို့စီးပွားရေးများအား ကမ္ဘာကိုဖွင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအင်အားစုကြီး မှာ နေ့ချင်းညချင်း နှစ်ဆတိုးလာခဲ့သည်။
ကုန်သွယ်ရေးသည် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ အဓိကမောင်းနှင်အားပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း စက်မှုကုန်ထုန်ပစ္စည်းကုန်သွယ်ရေးတွင် အဆ ၁၀၀ ကျော် (ဒေါ်လာ ၉၅ ဘီလီယံ မှ ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံ) အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကတည်းကပင် အထူးသဖြင့်ချမ်းသာသော နိုင်ငံကြီးများသို့တင်ပို့သော ကုန်ချောပစ္စည်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် အခွန်စည်းကြပ်မှုလျော့ချရန် နိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှုများပြုလုပ်ခဲ့မှုကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပို၍ လွယ်ကူစွာ တိုးပွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ယနေ့ဆိုလျှင် တရုတ်စသည့်ချမ်းသာသောနိုင်ငံများကို ထုတ်ကုန်တင်ပို့ရန် ရည်မှန်းချက် ထားခဲ့ကြသော နိုင်ငံများ၏ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍတွင် တိုးတက်လာမှုများ ကြောင့် ၎င်းနိုင်ငံများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းလည်း တိုးတက်လာသည်။ စစ်ပြီးခေတ်နောက်ပိုင်းတွင် နယ်မြေစည်းမခြားလုပ်ကိုင်နေကြသော နိုင်ငံပေါင်းစုံကုမ္ပဏီကြီးများက ကမ္ဘာအနှံကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း များကို ပို၍ပြုလုပ်လာကြသည်။
ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကြက်လာသော ကုမ္ပဏီကြီးများသည် ဈေးချိုသော အလုပ်သမားများအသုံးချနိုင် ရန်နှင့် ၎င်းတို့ဈေးကွက်နှင့်နီးကပ်စေရန် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစက်ရုံများကို ပင်လယ်ရပ်ခြားဒေသများ တွင်တည်ဆောက် လာကြမှုကြောင့် ပို၍ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယနေ့ကာလတွင် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ကိုခြေရာကောက်ရန်ပို၍ ပင်ခက်ခဲလာသည်။
ကုန်သွယ်မှုအားလုံး၏သုံးပုံတစ်ပုံကို ကုမ္ပဏီများအတွင်း မှာပငါပြုလုပ်နေကြ သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ ဥပမာ-တိုယိုတာ ကုမ္ပဏီသည် ကားအစိတ်အပိုင်းများကို ဂျပန်မှနေ၍ အမေရိကန်သို့ နောက်ဆုံးအဆင့်တပ်ဆင်ရန် ပေးပို့နေသည်။ မကြာသေးမီက Apple ကုမ္ပဏီကြီးသည် ၎င်း၏ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို အခြားကုမ္ပဏီများသို့ ခွဲဝေလုပ်ကိုင်နေသည်။ အထူးသဖြင့်အာရှတွင်ဖြစ်သည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်တွင် စက်မှုကုန်ထုန်လုပ်ငန်းများသာမက ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဆံကေသာပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းမှသည် ပညာရေးလုပ်ငန်း၊ စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း၊ ဆော့ဝဲလ်လုပ်ငန်းစသည့် လုပ်ငန်းများပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသည်။
ကုမ္ပဏီများသည် တစ်ချိန်ကပြည်တွင်းမှာ သာထုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှ ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေမှု လုပ်ငန်းချောမွေ့စေမှုအတွက် ကုန်ထုန်လုပ်ငန်းများကို ပင်လယ်ရပ်ခြားဒေသများသို့ လွှဲပြောင်းလုပ် ကိုင်လာကြမှုကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှ အလုပ်အကိုက်တော်တော်များများမှာ ခြိမ်း ခြောက်ခံနေရ သည်။ အိန္ဒိယသည် ကမ္ဘာတွင်အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ပင်လယ်ရပ်ခြားဒေသများသို့တင်ပို့် နေသည့် အကြီးမားဆုံး exporter ဖြစ်နေသည်။ အိုင်တီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ အဓိကနိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများသည် အိန္ဒိယတွင် အခြေစိုက်နေကြပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်နေကြသည်။
အိုင်တီနယ်ပယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် အိန္ဒိယစီးပွားရေးတွင်လည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ တရုတ်နှင့် အလားတူပင် အိန္ဒိယ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ အိုင်တီနယ် ပယ်မှ လူငယ်လုပ်သားများအနေနှင့်လည်း အိန္ဒိယတွင်ဓနနှင့် စားသုံးမှုတို့၌ သဘောထားများပြောင်း လဲလာသည်။ ပညာတတ်လူငယ်များအနေနှင့် အိန္ဒိယတွင်ဇိမ်ခဲပစ္စည်းဟုသတ်မှတ်ထားသော မော်တော်ကားများ ၊ အိမ်မြေများပိုင်ဆိုင်လာကြသည်။
ဤသို့ ဂလိုဘယ်လိုင်ဇေးရှင်းကမ္ဘာကြီး ထူးထူးကဲကဲပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှုကြောင့် အနောက်စက်မှုနိုင်ငံကြီးများ တွင်စိုးရိမ်မှုများရှိလာကြသည်။ ပြည်တွင်းမှ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို အခြားနိုင်ငံများသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်မှုကြောင့် အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုများရှိလာ၍ ဂလိုဘယ်လိုက် ဇေးရှင်းသည် ၎င်းစက်မှုနိုင်ငံကြီးများအတွက် ပမာဏကြောင့် အစိုးရမျးအနေနှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး ကံကြမ္မာကို မဖန်တီးနိုင်ကြတော့ သည့်အခြေအနေဆိုက်နေသည်။ လူတော်တော်များများအတွက် စိတ်ပူပန်မှုမဖြစ်စေဆုံးအချက်မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးစနစ် သစ်ကြီးအတွက် မျှတသောစည်းမျဉ်းများကို သဘောတူနိုင်စေရန် သို့မဟုတ် တာဝန်ယူကြီးကြပ်နိုင်မည့် သူမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤသို့ ဂလိုဘယ်ဖြစ်နေသောကမ္ဘာကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ဖြေရှင်းရမည့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း များမှာလည်း အားလုံးဒုက္ခတွေ့နေကြရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး WTO သည် အလုပ်သမားအဆင့်အတန်းများ ကိုထည့်မတွက်ခဲ့မှု သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုမှ ပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားခဲ့မှုတို့ကြောင့် ယခုအခါဝေဖန်ခံနေရသည်။
ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အရံအတားများ ဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုများမှာလည်း အခြေယိုင် နေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ IMF နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် World Bank တို့ကလည်း တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယကဲ့သို့ထွန်းသစ်စဈေးကွက်နိုင်ငံများကို ပို၍အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ မပေးခဲ့မှုကြောင့် ဝေဖန်ခံနေကြရသည်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့ငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့သည် ကြီးမားလှသော ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများရှိနေသည်။ ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးဈေးကွက်များအပေါ် ဩဇာသက်ရောက်နိုင်စွမ်းမရှိ တော့ချေ။
ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်က စီမံသင့်သလဲ
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ အခြားရှုထောင့်များတွင် နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများ အနည်းငယ်သာ ရှိသေးသည်။ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အပေါ်စည်းမျဉ်းဥပဒေများ ချမှတ်ရန် ၁၉၈၀ ခုနှစ်က OECD အဖွဲ့၏ကြိုးပမ်းမှုပျက်ပြားခဲ့ရသည်။
၎င်းအချိန်တွင် နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စတော့ဈေးကွက်များအတွက် စည်းမျဉ်းများကို လည်းနိုင်ငံတကာ အစိုးရထောက်ပံ့ခံအဖွဲ့များက ကန့်လန်ကာနောက်ကွယ်မှနေ၍ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအစည်းအရုံး ILO ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားသည့် အလုပ်သမားများ အလုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟုဆိုသော်လည်း အကောင် အထည်ဖော်နိုင်သည့်အာဏာမရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့ကြောင့်အဓိကမေးခွန်းမှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ကြီးထွားလာမှု ကြောင့် ကမ္ဘာ့စည်းမျဉ်းများအပြိုင်တိုးပွားလာနိုင်မည်လော။ ထိုအချက်သည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုး တက်မှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှုအတွက် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အဆိုးဖြစ်လာမည်လော ဟူသည့်မေးခွန်း ပင်ဖြစ်သည်။